Dzhillian Maykls देखि प्रशिक्षण: समीक्षा र सबैभन्दा लोकप्रिय भिडियो पाठ्यक्रम को विवरण
मिति, Dzhillian Maykls सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय अमेरिकी फिटनेस trainers को छ। यस डिस्क यसको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मात्र होइन अमेरिकामा पनि अन्य देशहरूमा ठूलो मांग गर्दै छन्। यसलाई विकास प्रशिक्षण, साँच्चै भन्दा आकारमा शरीर ल्याउन चाहने ती लागि प्रभावकारी छन्। त्यसैले, धेरै के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम Dzhillian Maykls छन् सोच छन्। तिनीहरूलाई को समीक्षा यस लेखमा विश्लेषण छन्। त्यसैले, कि व्यायाम र आहार मार्फत, तपाईं तुरुन्तै वजन र शरीर आकर्षक बनाउन सक्छ?
आधारभूत सिद्धान्तहरू: द्वारा Dzhillian Maykls आहार "वजन फेंक"
समय र अतिरिक्त वजन भोगे यो प्रसिद्ध स्त्रीलाई। तसर्थ, किशोर, आफ्नो आमाले किकबक्सिङ पठाइयो। वर्षौंदेखि यो एउटा अचम्मको आंकडा को मात्र होइन मालिक, तर पनि आफ्नो शरीर स्वस्थ र थप आकर्षक बनाउन चाहने सबै ती महिला र पुरुष एक अपरिहार्य सहायक भएको छ - त्यो क्षण देखि Gillian जीवनमा परिवर्तन गर्न थाले।
उचित आहार र नियमित व्यायाम - वजन सिस्टम दुई मुख्य घटक हुन्छन्। वास्तवमा, Dzhillian Maykls आहार - यो एक जीवन शैली, बस एक पातलो उत्पादनहरु को संग्रह हो। यहाँ यसको आधारभूत सिद्धान्तहरू छन्:
पहिले तपाईं चयापचय को प्रकार निर्धारण गर्न आवश्यक छ। मानिसहरूलाई त्वरित चयापचय गर्दा को मालिक, प्रोटीन को आहार प्रवेश गर्न आवश्यक छ ढिलो चयापचय जटिल कार्बोहाइड्रेट खान सक्छ।
उत्पादन उपयोगी र प्राकृतिक हुनुपर्छ - सारा अनाज, दुग्ध उत्पादन, दुबला मासु र माछा देखि तरकारी, फलफूल, रोटी, खान अनुमति छन्। तर मीठो संख्या, तला र समर्थित सीमित हुनु पर्दछ।
5 receptions - - दिनहुँ खाद्य दर4द्वारा विभाजित हुनुपर्छ चयापचय प्रक्रियाहरू पत्र गर्न मात्र तरिका हो।
क्यालोरी को रेकर्ड राख्न निश्चित हुनुहोस्। कुनै पनि उत्पादन र पनि खाना को क्यालोरी सामग्री विशेष अनलाइन कैलकुलेटर प्रयोग गणना गर्न सकिन्छ। दिन को समयमा, तपाईं खाना संग, तपाईं प्रयोग गरेका छन् भन्दा बढी क्यालोरी बाल्न पर्छ।
र, पाठ्यक्रम, वजन प्रणाली अभिन्न भाग प्रशिक्षण छन्। यो अन्त गर्न, Gillian पहिले नै भिडियो पाठ सबैभन्दा प्रभावकारी अभ्यास संग धेरै सीडी जारी गरेको छ।
"तीस दिन को दुबला आंकडा" Dzhillian Maykls द्वारा: समीक्षा र विवरण
यो पाठ्यक्रम तदनुसार, तीन भिडियो पाठ, प्रत्येक जो 10 दिन समर्पित गर्नुपर्छ, तीन स्तर हुन्छन् र। व्यायामको लागि, तपाईं एक चटाई र dumbbells आवश्यक छ। यो जटिल व्यायाम लगभग 25 मिनेट रहन्छ र न्यानो, मुख्य भाग र streamers हुन्छन्। मुख्य भाग एक बरु असामान्य सिस्टम छ:
बल प्रशिक्षण तीन मिनेट;
एरोविक्स को दुई मिनेट;
पेट मांसपेशीमा मा व्यायाम को एक मिनेट।
एक व्यायाम तीन6मिनेट नजिकिंदै हुन्छन्। मिति, यो पाठ्यक्रम लोकप्रिय मध्ये एक छ। समीक्षा महिला अभ्यास को प्रभावकारिता प्रदर्शन गरेका छन्। मात्र यी अभ्यास प्रयोग वजन गर्न सक्छन्, तर पनि शरीर बढी लचिलो बनाउन, मांसपेशिहरु बलियो बनाउन।
"हामी, बोसो बाल्न चयापचय बढाउने" - प्रणाली Dzhillian Maykls: मात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया
", बोसो जला चयापचय गति।" भनिने धनी प्रशिक्षण - पहिले नै तीस दिनको लागि वजन को प्रणाली पारित गरेको छ गर्नेहरूका लागि, एक निरंतरता छ अभ्यास को यो सेट धेरै गाह्रो अघिल्लो हो, त्यसैले यसलाई शायद फिटनेस मा शुरुआती लागि उपयुक्त छ। प्रशिक्षण बारे 55 मिनेट रहन्छ। यहाँ मांसपेशिहरु र sredtsa बलियो उद्देश्य छ प्रत्येक जो शक्ति र कार्डियो दुवै छन्।
"6 हप्तामा एक सपाट पेट" - प्रणाली Dzhillian Maykls: समीक्षा र वर्णन
एक विश्वव्यापी प्रतिष्ठा संग कोच अर्को एकदम लोकप्रिय पाठ्यक्रम। प्रशिक्षण न्यानो-अप, मुख्य भाग, र विश्राम हुन्छन्, अघिल्लो अवस्थामा रूपमा बारेमा 35 मिनेट लिन्छ र। यहाँ तपाईं मात्र को मांसपेशिहरु बलियो कि छैन भन्दा प्रभावकारी अभ्यास पाउन सक्नुहुन्छ को abdominals, तर पनि बनाउन एक सपाट पेट र लोचदार प्राप्त शरीर बोसो को छुटकारा र धीरज दिनुहोस्।
यो Michaels कसरत को कुनै पनि सजिलो छैन भन्न सकिन्छ भने छ - हरेक मिनेट सकेसम्म प्रयोग गरिन्छ। जटिल, तर प्रभावकारी अभ्यास। यो महिला लाखौं समीक्षा द्वारा प्रमाणित छ। यो बुझ्ने छ। आखिर, मात्र अधिकतम प्रयास लागू गरेर, तपाईं एक तीव्र प्रभाव हासिल गर्न सक्नुहुन्छ।
एलर्जी संग आहार: रोग जीत, खाने को लागि बन्द!
कसरी वजन लागि प्रोटिन प्रयोग गर्ने?
Vegetarianism: मानव स्वास्थ्य लाभ र हानि
Gastritis लागि पोषण।
गर्भवती समयमा बीट: लाभ, संकेत, तयारी को तरिका
बच्चाको स्वास्थ्य कुनै पनि हानि बिना वजन लागि स्तनपान लागि आहार
Penoizol: समीक्षा, विनिर्देशों। वार्मिंग penoizol
आदिम समाज को संस्कृति - विशेष गरी यसको
राष्ट्रिय पार्क र भ्रमण लायक छ जो अर्कह्याङ्गेल्स्क क्षेत्र, को रिजर्व
भन्ने एक घर terrarium बसोबास एक चिप्लेकिरो खान्छ
साँचो प्रेम बारेमा सबै भन्दा राम्रो समकालीन फिलिमहरु
आहार Protasov: पावर सिस्टम विवरण
"Diplomat" - उम्दा सलाद लागि
चंद्र पात्रोको शैतानी दिन
अमानवचलित हवाई वाहन। सुविधाहरू drones
लसुन स्प्राउट्स कसरी खाना पकाउनु? टिप्पणी मा नुस्खा
ग्रेट ब्रिटेन को यस्तो विविध प्रतीक